नेपालमा बिबाहको लागि म्यारिज ब्युरो कम्पनी !! - चारदिशा
नेपालमा बिबाहको लागि म्यारिज ब्युरो कम्पनी !!
January 28, 2015 चारदिशा देश,बिबिध,समाज
चारदिशा सम्बाददाता ,
विवाहको लागि बेफुर्सदिलाहरुलाई सघाउने गरि पोखरामा ‘म्यारिज ब्यूरो’ संचालनमा आएको छ । वेडिङ प्लानर प्रालि नाम दिएर युवा व्यवसायी बालकृष्ण नेपालीले ‘म्यारिज ब्यूरो’ संचालनमा ल्याएका हुन् ।
‘अहिलेको व्यस्त दैनिकीमा आफु सुहाँउदो वर–वधु छनौट गर्न पनि समस्या आईरहेको छ । त्यसैले त्यो कम्पनिले विहे गर्न योग्य युवायुवतीका लागि आफुले खोजेको जस्तो जोडी मिलाईदिएर लमिको काम गर्ने ’ कम्पनिका संचालकको दावी छ । पोखरामा ‘म्यारिज ब्यूरो’को प्रचुर संभावना भएकैले उनिहरुले यसलाई व्यवसायिक रुप दिन खोजेको दावीलाई कामले प्रमाणित गर्ला नगर्ला हेर्न बाँकी नै छ ।
विशेषगरि भारत र यूरोपियन मुलुकमा यो व्यवसाय फस्टाउँदो छ । पोखरासँगै नेपालकै लागि यो व्यवसाय केहि नयाँ भएकोले चुनौती भएपनि योग्य जोडी पाउनमा यसको योगदान निकै रहने प्रालिका संचालक दाबी गरेका छन । कम्पनीले विवाहपुर्व र विवाहेत्तर सम्बन्धको बारेमा उचित परामर्श समेत दिने ब्युरोको उद्यस्य रहेको जनाइएको छ ।
गत आईतबारदेखि संचालनमा आएको ब्यूरोले एकल महिला र पुरुषका लागि पनि जोडि मिलाउने काम गर्ने जनाएको छ । यस्तै दृष्टिविहिन र फरक क्षमता भएकाहरुको लागि निशुल्क परामर्श दिनुका साथै जोडी खोज्ने काम गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।
स्मरण रहोस् यो ब्युरो नेपालको पहिलो जोडी खोज्ने लमी ब्युरो हो । जसलाई नेपालको सामाजिक बिकासको अनौठो अभ्यासको रुपमा लिईएको छ ।
फुलमाया र गिरिजाप्रसाद
आइएएफ अवार्ड बेल्जियममा